Bath & Jirka Warshad - Shiinaha Bath & Soosaarayaasha Jirka, Alaab-qeybiyeyaal
Dhaqo Jidh-dilis maalinle ah oo loogu talagalay maqaarka qalalan oo lagu dejiyo
BARNAAMIJKA: Wild Orchid leh Vanilla VANILLA WAA OGAYSIIS-JOOJINTA MUUQAALKAN SI AAD U HESHO BADAN. Kaymaha duudduuban iyo heshiisyada miraha qaniga ku ah waxay gacan ka geystaan ​​soo saarista urka dabiiciga ah ee maqaarka, dhalada farshaxanka-qurxinta lehna waxay ku darsataa soo jiidashada guud ee udgoonka. SET oo dhameystiran HBS ayaa ka kooban -400ml qubeys jel - Sanduuqa warqadda daabacan ee midabka Faahfaahin: CAAFIMAAD iyo MAQAAR NADIIF AH: Waxaa loo sameeyay in si fiican loo nadiifiyo maqaarka iyada oo aan la qalajin, maqaarka maqaarkiisa la cusbooneysiiyo oo la tamar siiyo. SI CAJIIB AH SI CAADI AH ...
ENT:: Flo sc sc sc Flo Flo Flo Flo Y Y Y Y Y With With With With With With With ent sc ent sc ent ent ent ent beautiful ent ent Udugga jirka ee sida quruxda badan u daryeelaya urka Ubaxyada qaaciddadayada horumarsan ayaa maqaarkaaga ka dhigeysa mid nadiif ah, caafimaad qaba oo qoyan. SET oo dhameystiran HBS ayaa ka kooban -400ml qubeys jel - Sanduuqa warqadda daabacan ee midabka Faahfaahin: CAAFIMAAD iyo MAQAAR NADIIF AH: Waxaa loo sameeyay in si fiican loo nadiifiyo maqaarka iyada oo aan la qalajin, maqaarka maqaarkiisa la cusbooneysiiyo oo la tamar siiyo. CAJIIB AH OO KU SAABSAN NADIIFKA JIRKA: OD Natural Natural: Natural Natural Natural Natural Natural Natural ent ent ent ent ent ent ent Natural Natural ent ent ent Natural Natural ent Natural Dhir dabiici ah oo dabiici ah oo jirka lagu dhaqo ayaa ka caawisa nasashada jirka iyo maskaxda intii lagu jiray ...